Qarax ka dhacay Kaniisad ku taalla Nairobi | KEYDMEDIA ONLINE
Qarax ka dhacay Kaniisad ku taalla Nairobi
NAIROBI (Keydmedia)- Magaalada Nairobi ee Xaruunta dalka Kenya ayaa Saacadahiii ugu danbeeyay ka dhacay Qarax Kaniisad ku taalla magaaladaasi.
Charles Owino oo ah kuxigeenka Afhayeenka Booliska dalka Kenya ayaa sheegay in Qaraxa uu ahaa Bombka gacanta laga tuuro kaasi oo lala eegtay kaniisad lagu magacaabo Gods House of Miracle Church taasi oo ku taalla magaalada Nairobi.
Owino ayaa xusay in 10 Qof ay ku dhaawacmeen Qaraxaasi,isagoo intaasi ku daray in dadka ku dhaawacmay Weerarka ay kamid ahaayeen dad badan ku cibaadasanayeen Kaniisada Maanta oo Axad ah.
Ma jirto illaa hadda Cid sheegatay Mas’uuliyadda Qaraxa, balse waxa uu imaanaya xilli Isniintii lasoo dhaafay ay Safaaradda Maraykanka ee magaalada Nairobi ay ka digtay Qaraxyo ka dhaca Dhismooyinka Dowladda, Hotels iyo Goobaha lagu cibaadaysto ee ku yaalla dalka Kenya.
Weerarkan ayaa kamid ah Qaraxyo isdabajoog ah oo ka dhacaya dalka Kenya tan iyo markii Ciidamada Kenya ay Xoog kusoo galeen Gudaha dalka Soomaaliya Sanadkii tagay, kuwaasi oo hadda Dhibaatooyin ku haya dadka Rayidka ah.